Rooble oo amar siiyay laamaha Ammaanka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Rooble oo amar siiyay laamaha Ammaanka
Rooble oo amar siiyay laamaha Ammaanka
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku amray laamaha Ammaanka dowladda Soomaaliya in si deg deg ah maxkamad loo horgeeyo askar ka tirsanaa ciidanka xoogga oo Muqdisho dilay wiil iyo gabadh walaalo ah habeen hore.
Rooble oo xalay war soo saaray ayaa sheegay in aan la aqbali Karin askarta ciidanka dowladda Soomaaliya in ay dilaan dadka shacabka ee aan waxba galabsan, islamarkaana ciidanka booliska uu uga mahadcelinaayo soo qabashada eedeyanayaasha.
Waxaa uu sidoo kale u ballanqaaday ehelada dhalinyaradii lagu dilay Muqdisho in ay heli doonaan Caddaalad sida ugu dhaqiyaha badan, waxaana uu u diray tacsi.
“Waxaan xanuunka iyo murugada la qeybsanayaa una tacsiyeynayaa qoysaskii ay geeriyoodeen Allaha naxariistee dhallinyaradii xalay iyo galabta lagu dilay Muqdisho ee Sakariye Maxamuud Xuseen, Sowda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo caawa la dilay ,Waa tallaabo wanaagsan in ciidammada ammaanku soo qabteen eedaysanayaashii. Waxaan farayaa in si deg deg ah sharciga loo hor geeyo si dhibbaneyaashii iyo eheladoodu caddaalad u helaan”ayuu kui yiri war uu soo saaray Rooble.